Turkiga oo saldhigiisa milatari ee gudaha Muqdisho furi doona bisha September ee sanadkan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTurkiga oo saldhigiisa milatari ee gudaha Muqdisho furi doona bisha September ee sanadkan
May 12, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
London-(Puntland Mirror) Turkiga ayaa saldhigiisa milatari ee gudaha Soomaaliya furi doona bisha September ee sanadkan.
Isaga oo ka hadlayay Khamiistii Shirka Soomaaliya ee lagu qabtay London Raysulwasaaraha Turkiga Binali Yildrim ayaa sheegay in saldhiga milatari ee Muqdisho oo uu Turkigu dhisay uu shaqada bilaabi doono bisha September.
Sida ay sheegeen masuuliyiinta Turkiga, saldhiga miltari, kaasoo dhismihiisu bilaabmay bishii Maarso ee sanadkii 2015, ayaa loo adeegsan doonaa in lagu tababaro ciidamada Soomaaliya si loo xoojiyo dagaalkooda ka dhanka ah ururka hubaysan ee Al-Shabaab.
Waxa uu awood u leeyahay in lagu tababaro 500 askri halkii marba waana saldhiga milatari ee ugu weyn oo Turkigu ku leeyahay wadan ajnabi ah.
Qorshuhu wuxuu ahaa in la furo bishii lasoo dhaafay ee April ee sanadkan, laakiin waxaa dib loo dhigay ilaa September, sida uu sheegay Raysulwasaaruhu.
May 11, 2017 Shirka London ee Soomaalida oo ka furmay gudaha magaalada London